Iindaba - Iimpawu zeRice Bird Net
Okwangoku, iintaka ezininzi zisela ukutya, kodwa ukuba iziphumo zobusela obukhulu zisabalulekile, abachaphazelekayo baphuhlisa iminatha yeentaka ukulungisa iimeko ezinjalo. Ngenxa yeendawo ezahlukeneyo zokusetyenziswa, iintlobo zeminatha yeentaka nazo zahlukile, kodwa inetha zeentaka ezisetyenziselwa irayisi zibizwa ngokuba yi "rice bird networks", kwaye iimpawu zabo ziyamangalisa xa kuthelekiswa nezinye iimveliso. Ke zithini iimpawu zeRice Bird Net? Jonga oku kulandelayo:
I-Rice Bird Proof Net lilaphu le-mesh elenziwe ngokolula i-polyethylene kusetyenziswa izongezo zekhemikhali ezifana nokuthintela ukwaluphala kunye nokukhuselwa kwe-UV njengeyona nto iphambili yemathiriyeli ekrwada, kwaye inamandla aphezulu okuxinana, ukumelana nobushushu, ukunganyangeki kwamanzi, ukuxhathisa umhlwa, kunye nokumelana nokuguga. Inokubulala izinambuzane eziqhelekileyo ezifana neempukane kunye neengcongconi, ayinancasa, kulula ukuyilahla inkunkuma. Ukulungele ukugcina kunye nokusetyenziswa kusetyenziso oluqhelekileyo, ubomi beshelufu obuchanekileyo bunokufikelela malunga ne-2-5 iminyaka. Umnatha weentaka wentaka unokukhanya okucacileyo kunye nomsebenzi womthunzi ophakathi, udala iimeko ezifanelekileyo zokukhula kwesityalo ngokufanelekileyo, ukunciphisa kakhulu ukusetyenziswa kwemichiza yokutshabalalisa izinambuzane kumasimi emifuno, kunye nokucoca izityalo zemveliso. Kwaye unikeze isiqinisekiso esinamandla sobugcisa kuphuhliso lwemveliso eluhlaza. I-Rice Bird Net nayo inamandla okumelana neentlekele zendalo ezifana nezaqhwithi kunye nesichotho.
Eli nqaku ikakhulu lazisa iimpawu zeRice Bird Net. Ukusetyenziswa kwezi mveliso kuye kwandisa kakhulu isivuno zerayisi, ngoko ke ukuthandwa kweemveliso ezifana neinetha zeentaka zerayisi kwezolimo kuphezulu kakhulu, iindaba ezilungileyo kubalimi kwaye ngoku kusetyenziswa iminatha yeentaka zeerayisi. Okukhona amafama aqalayo, kokukhona ukusetyenziswa ngokubanzi kweemveliso ezinjalo, kokukhona kunyuka inzuzo. Ngowuphi umnatha wokukhusela iintaka wase-US ongcono? Ewe kunjalo, Changzhou Kednet.